Urticaria: chinotapuriranwa kana kwete? Ngatitaurei kubata
Ndiani ari ganda haana kuonekwa kanenge kamwe muupenyu mune muchimiro mapundu ose Maronda akasiyana? Zvirokwazvo hakuna zvakadaro. Muchiitiko chino, haasi munhu wose anogona kutsanangura hunhu panowanikwa yavo. Zvichakadai, chirwere ichi anonzi urticaria. Nyaya wakatsamwisa urticaria? Chinotapuriranwa kana kwete iye? Pakupindura pamusoro mibvunzo, zvinofanira kusimbiswa kuti chirwere zvinogona kukonzerwa mamwe allergens icho munhu ane chairo maitiro.
Chokwadi, vanhu vane chirwere kuoneka, ndinoda kudzidza zvakawanda pane urticaria, chinotapuriranwa kana kwete chirwere.
Zvinofanira kucherechedzwa kuti imwe chikonzero chokunetseka. Simba Zvikonzero kuratidza kuti mikoko kwevanorwara, akadai akagara pedyo newe, murume, chero mumwe vanachiremba havana kutungamirira.
Funga mubvunzo zvinhu urticaria, chinotapuriranwa kana kwete zviri, zvizere.
Hazvina chakavanzika panobva zvirwere vari notumwe, nemavhairasi, mabhakitiriya, helminths. Panguva iyoyowo, onana nomunhu ane zvirwere mhando iyi inogona kubata pachako. Hunhu mikoko yakasiyana - zviri maitiro ganda kuti nechinzwano zviwane imwe mhando. Nemamwe mashoko, chirwere mune mubvunzo mumwe chimiro sema kuita.
chirwere ichangobva kutaurwa mberi nokuti kuti pfuma anogadzirwa ganda mumasero - histamine. It ane kunyanya mari kunotungamirira kuti paumbwe Maronda akasiyana hapana Pink uye tsvuku kwerima guru. Kazhinji, chimiro idzodzo dzakadaro achiperekedzwa kuvava uye nokupisa.
Muchidimbu, isu kare akapindura mubvunzo wokuti nei paine urticaria. Chinotapuriranwa kana kwete chirwere - mutongi pachako. Zvinofanira kucherechedzwa kuti zvirwere-vataurwa pamusoro inogona rakakamurwa chirwere uye chakasimba. Wokupedzisira nzira, sezvo akatsinhira mashoko ezvokurapa, vakawanda cho chizvarwa chevechiduku, asi kubva chisingaperi urticaria vanhuwo vachitambura zvikuru vakura zera.
Saka, mubvunzo kana mapundu kunoitawo kuti vamwe vashingaire, uye zvinokuchengetedzai kupa mhinduro kunaka. Izvi kunosimbiswa ndechokuti chirwere hunogona kutapukira kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa, ukuwo zvirwere "nemavhairasi" haana nhaka.
Sei kuparadzira nhema kuti mikoko - chiri chirwere?
Asi nei vamwe vanoti, somuenzaniso, urticaria nedzevakuru kunoitawo kuti vamwe vashingaire? Chokwadi chokuti nyore townsfolk nyore patsanura chirwere ichi ane chirwere pane kuziva kuti zvinogona kuva chiratidzo chimwe chirwere. Zvikurukuru, izvozvo angaperekedzwa zvinetso chiropa, mudumbu, neitsvo. Zvirwere epfungwa zvinogona vaine ganda mapundu dziri Maronda akasiyana. Kazhinji kutsanangura mhaka chisimbwa nyanzvi kunyange kuoma iri paganda. Zvisinei, zvinofanira kucherechedzwa kuti "yakapinza" mhando urticaria inonyangarika roga pashure anenge 28 Mazuva.
The kumusoro kwete chete chirwere haisi chinotapukira - iri chero zvazvingava havagoni kutungamirira kurufu. Asi hatifaniri kuregeredza pakurapa urticaria, nokuti dzimwe nguva zvinogona kuita kuti matambudziko.
How kubata Mamota? Ndine kuenda chiremba?
Colic mu vacheche - sei kubatsira mwana wako?
Salmonellosis: incubation nguva, hunokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Catarrhal angina: Zviratidzo uye kurapwa nzira
Washington Rugare: ezvinhu uye gore siginicha
Ischemic heart disease. Chii icho uye chii chiri kuratidzwa kwayo?
Popov: mavambo mazita uye zvinofadza zvinhu
Corner kabati: saizi mureza zvigadzirwa
Model uye mutambi Kendra Wilkinson: basa, mhuri, matambudziko muupenyu
Uripiko murayiro "Mhanyai" muna Windows 8. zvirongwa zvinogona kumhanyira kubva "Mhanyai"
Black kuCeylon tii: inobatsira ehupfumi
Akadhakwa kutyaira: zvakanyanyisa hanya kana
Magadzirirwo "Mauser K-96." Pistol Mauser C-96 - the kunozivikanwa nepfuti
Mafuro vanhu nemhuka, kunyanya kunenge uye wongororo
Honda Maererano, wongororo uye zvinhu